Dhimmi Hararii akka malee ummata Oromoo achi keessa jiraatanii ol tahee jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDhimmi Hararii akka malee ummata Oromoo achi keessa jiraatanii ol tahee jira.
Dhimmi Hararii akka malee ummata Oromoo achi keessa jiraatanii ol tahee jira.
Ummata Oromoo naannoo Harari jalatti ukkaamsanii xiin-sammuun dadhabsiisuu fi hamiilees kolaasuuf waggoota 27’n dabran kana aanga’oonni Adaree fi jeneraaloonni wayyaanee akka malee irratti hojjatanii jiru. Dhimmi Hararii akka malee ummata Oromoo achi keessa jiraatanii ol tahee jira. Kanaaf ani akka kootti yaada furmaata tahu yoon dhiheessu;
Ummannii Oromoo kan Harargee gamtaan ka’uun akka falmattan yaammicha Oromummaa godha. Naannoo Hararii wanti ja’amu ulaagaa seeraas tahee qabatamaan hundaa’uu akka hin dandeenye bifa mormiitiin dhageessisuun dirqama. Harariin naannoo miti godinaa fi aanaa addaattuu caaseeffamuu akka hin dandeenye murannoon ibsuun dirqama. Hanguma nuti callifnee teenyuun shirri hamaa fi yakki suukanneessaan daran nurratti hojjatamaa akka deemu beekuun dirqama taha. Keessattuu ammoo jiraattoonni Oromoo naannoo Hararii jalatti galtan hanga hiree keessan murteeffattanii gonkuma dirri itillee isin tuquu hin qabu
“Lukkeelen TPLF ganddoota Finfinnee keessatti naqaman angoo irraa ka’uun Gen. Samoora waan gadisiseef garaa jalaan aarii isaanitti haaloo bahuuf lafa qotee bulttoota keenna daangaa Finfinnee jiran hunda maqaa kaartaa hin qabdan jedhuun manneen jalaa diiguuf aanota daanggaa finfinnee hundaa irratti lafa jalaan soso’aa jiru. Haluma kanaan Bulbulaai Aanaa 12 tti mannooni 10000 ol diiguuf karoorfatani jiru. Kun aanota finfinnee daangaa hundarrati akka itti fufu karoorfataniru. Kanaafuu ummanni keenna eyyee iyyas waliif dabarssee hojii lukkeelen TPLF karoorfatan kana fashaleessu qabna!”
Saamichaa Lafa Qotee Bulaa Oromoo Maqaa Mana Waliin Jireenyaa (Kondomiiniyeemii) jedhuun Qofaan Raawwatamee jiru haala kana fakkaata. – https://t.co/OAK4wBjIlB pic.twitter.com/RJkZxuWzhC
Saamichaa Lafa Qotee Bulaa Oromoo Maqaa Mana Waliin Jireenyaa (Kondomiiniyeemii) jedhuun Qofaan Raawwatamee jiru haala kana fakkaata.
ሜቴክ ከፍተኛ የሀብት ብክነት እንዳለበት አመነ-ያለ ጥናት የተመረቱ ከዘጠኝ ቢሊዮን ብር በላይ ማሽነሪዎች ለብክነት ተጋልጠዋል